ठगी र अपराधिक लाभ लिएको कसुरमा एउटै व्यक्ति विरुद्ध १७ वटा मुद्दा दर्ता ! | सुदुरपश्चिम खबर
ठगी र अपराधिक लाभ लिएको कसुरमा एउटै व्यक्ति विरुद्ध १७ वटा मुद्दा दर्ता !
काठमाडौंः ठगी र अपराधिक लाभ लिएको कसुरमा मुद्दा चलाइएका विराटनगरका ‘मिटरब्याजी’ गिरोहका नाइके ४५ वर्षीय मन्टु भनिने सञ्जयप्रसाद रौनीयार कारागार चलान भएका छन्।
आजदेखि अनलाइनबाट ट्राफिक नियम उल्लंघनको जरिमाना तिर्न सकिने !
शहिद दशरथ चन्द र गंगालाललाई साक्षी राखेर प्रतिगमनको विरोध !